Tinye Companylọ Ọrụ LinkedIn Soro Button | Martech Zone
Tuesday, February 28, 2012 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
M hụrụ eziokwu n'anya n'ezie na LinkedIn na-aghọ ezigbo ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-azụ ahịa. Maka azụmaahịa azụmaahịa (B2B) ndị ahịa na ndị na-ere ahịa, ịgbaso ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ na LinkedIn nwere ike inye gị nnukwu ozi gbasara ngwaahịa, ọrụ na ozi ụlọ ọrụ ha. Mgbe inwetara ohere, ikwesiri ibudata ihe omuma nke LinkedIn - ngbanwe nke algorithm ha maka imata akuko di elu na isi okwu n'ime netwo ahia gi di nma.
LinkedIn na-enye ugbu a bọtịnụ maka ndị otu ịgbaso azụmahịa gị:
Naanị ịmalite dee aha Companylọ ọrụ gị na bọtịnụ kere ha ma họrọ ya site na akpaaka-zuru dropdown. Ọ bụrụ na ịnọghị ebe ahụ, ịnwere ike ịmepụta profaịlụ ụlọ ọrụ… nke akwadoro ya!
Nwere ike ịhụ bọtịnụ na-arụ ọrụ na anyị elekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnga saịtị. Jide n'aka iso anyi!
Tags: LinkedInụlọ ọrụ njikọlinkedin Onye Mmepụtanjikọ na-esonjikọ bọtịnụ njikọnjikọ na ndụmọdụ